မန္တလေးသင်္ကြန် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦး ရှိပြီ...! - Thadin
HomeNEWSမန္တလေးသင်္ကြန် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦး ရှိပြီ…!
မန္တလေးသင်္ကြန် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦး ရှိပြီ…!
April 17, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မန္တလေးသင်္ကြန် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦး ရှိပြီ…!
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေအတွင်း ၁၃-၄-၂၀၁၉ မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့အခြေအနေများ
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ သေဆုံးသူ ၃ ဦး ရှိပြီး ၃၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ ၁၃ဦးသေဆုံးပြီး ၁၀၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၇၇ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သင်္ကြန် ၃ရက်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၂၃ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။
Source :Mandalay Police
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေအတွင်း ၁၄-၄-၂၀၁၉ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့အခြေအနေများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေအတွင်း ၁၅-၄-၂၀၁၉ မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့အခြေအနေများ
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးနယျမွအေတှငျး ၁၃-၄-၂၀၁၉ မဟာသင်ျကွနျအကွိုနအေ့ခွအေနမြေားသင်ျကွနျအကွိုနေ့ သဆေုံးသူ ၃ ဦး ရှိပွီး ၃၄ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
သင်ျကွနျအကနြမှေ့ာ ၁၃ဦးသဆေုံးပွီး ၁၀၅ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါတယျ။သင်ျကွနျအကွတျနမှေ့ာ ၇ ဦးသဆေုံးပွီး ၁၇၇ ဦး ဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။သင်ျကွနျ ၃ရကျတာကာလအတှငျး စုစုပေါငျးသဆေုံးသူ ၂၃ဦးရှိပွီး ဒဏျရာရသူ စုစုပေါငျး ၃၁၆ ဦး ရှိခဲ့ပါတယျ။
This Month : 34665
This Year : 176122
Total Users : 535146
Total views : 2419790